Ibsa haala adeemsa araara dhaabota ABO koree Qeerroo Oromoo irraa kenname. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa haala adeemsa araara dhaabota ABO koree Qeerroo Oromoo irraa kenname.
Ibsa haala adeemsa araara dhaabota #ABO koree Qeerroo Oromoo irraa kenname.
Qeerron Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda irraa walitti dhufuun dhaabota #ABO tokkoomsudhaaf ji’oota 10 oliif sochii araaraa gochaa turuun ni yaadatama. Adeemsi koreen Qeerroo araara dhaabota ABO tokkoomsudhaaf dhaabbate gochaa ture guyyaa hardhaa adeemsa isaanii xumuruun haala adeemsa araara hanga ammaa ture irratti ibsa kennee jira.
I/A hayyu duree ABO Abbaa Nagaatin hoogganamuu tahuun gurbaan kan filame #Bilisummaa Birhanuu Ararsaa#Damee_tikaa mootummaa tahee hojjachaa jira. Gurbaan kuni gamtaa barattootaa keessa yeroo turetti araara dhaabota ABO tiif warra deemaa turan keessaa tokko tahee osoo jiruu dhaabonni kunniin lamaan osoo hin araaramin warra isa kaanitti dabalamuun aangoo fudhate. Gama biroon immoo mootummaa keessatti humna tikaa tahee hojjachaa jira.Danqaa guddaa araara ABO kan tahaa jiru ABOn inni kuun kan mootummaadhan deeggaramuu fi gartokkeen namoota isaan keessatti argamanii kan mootummaa irraa muudama aangoo qabaniidha. Namoonni mootummaa keessatti galanii mootummaa wajjiin hojjatan kunniin afaanin tokkummaa barbaanna jechaa ABO warra kaanitti mootummaa wajjiin duulu.
Tokkummaa ABO tiif namoota deemaa turan keessaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu tokko yoo tahu shira itti xaxuun abbootii Gadaa keessaa baasan. ABOn Daawud Ibsaan hoogganamu irratti duula gaggeessudhaan ABO isa kaan leellisuun qaamota mootummaa fi garee mootummaan ijaaree akka ABOn hin tokkoomne wantoota godhaniidha. Kaayyon isaa ABO bakka lamatti qoodudhaan laamshessuun dhabamsiisuudha. Gareen Qeerroo Oromoo araara kanaaf socho’aa turre dhaaba kamuu irratti duullee balleessuu osoo hin taane rakkoo isaan gidduu furuudha.
የራሺያው አምባሳደር ምን ማለት ፈልጎ ነው??
Gurbattiin kun alaabaa ABO kan isheen of bukkeetti fannifatee teessu yeroo sadarkaan fudhatama ishee oromoo biratti gadi bu’u qofa malee,akeekaaf kaayyoo alaabaa kana beekee yookaan itti amanee utuu hin taane alaabaa kana fannifatee deeggaraa ABO of fakkeessee sabboontota ittiin galaafachuuf.gabaabummaati Jawaar alaabaa kana itti amanee utuu hintaane daldala siyaasaaf itti fayyadama.kanaafuu kana beettanii ijoolleen oromoo sabboontota taatan Alaabaa fannifatee sabboona fakkaatee isiniitti siqee akka isin hin galaafanne cimsaa irraa of eeggadhaa.shira isaa kan ati salphatti ittiin adda baafachuu dandeessu immoo yeroo biyya alaa kana keessa jiruuyyuu guyyaa tokkoof fannifatee hin beeku.har’a garuu biyya yoo alaabaa kana sirkatti argan akka bofaa si tumanii mana hidhaatti si darbatan Keessatti inni alaabaa kana sabboonummaaf fannifatee ta’a yoo kan jettu taate ati gowwaa qofa utuu hintaane ati doofaadha.